DESKTOP ပေါ်မှာ ICON တွေကိုလျှော့ချသို့မဟုတ်ချဲ့ရန်ကဘယ်လို - WINDOWS ကို - 2019
Desktop ပေါ်မှာ icon များ၏အရွယ်အစားပြောင်းခြင်း
အချို့သောအခြေအနေများတွင်အသုံးပြုသူတစ်ဦးအဖြစ်သင်စာတိုက်န်ဆောင်မှုများအသုံးပြုခြင်းမှတဆင့်မည်သည့်ဒေတာလွှဲပြောင်းရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ သငျသညျစာရွက်စာတမ်းများသို့မဟုတ်တစ်ခုတစ်ခုလုံးကိုဖိုင်တွဲပေးပို့နိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုသင်ယူဖို့, ကြှနျုပျတို့သညျဤဆောင်းပါး၏သင်တန်းထပ်မံရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။
ဖိုင်တွေနဲ့ e-mail, ဖိုင်တွဲပို့ပါ
e-mail, လဲလှယ်မှုအတွက်န်ဆောင်မှုများ၏စစ်ဆင်ရေးမှတဆင့်အချက်အလက်များ၏အမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားများလွှဲပြောင်းမဟုတ်ဘဲမှဖော်ပြထားခြင်းဒီအခွင့်အလမ်းသင့်လျော်သောအမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီကိုသယံဇာတအပေါ်စာသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအပျေါမှာထိ။ အလုပ်လုပ်တဲ့၏အသုံးပြုမှုအတွက်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ပင်အတွေ့အကြုံရှိအသုံးပြုသူများရပ်တချပြီး, သိသိသာသာကွာခြားနိုင်ပါတယ်။
စာတိုပေးပို့ရေးအတွက်အားလုံးန်ဆောင်မှုအပြည့်အဝဖိုင် directory များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်ကြသည်မဟုတ်။
ကျနော်တို့ထားပြီးမေးလ်မှတဆင့် data ကိုဂီယာ၏ခေါင်းစဉ်အပေါ်ထိမိပါပြီသတိပြုပါ။ အထူးသဖြင့်, ဒီဗီဒီယိုနှင့်ရုပ်ပုံများကိုအမျိုးမျိုးတို့ကိုသက်ဆိုင်သည်။
သငျသညျမျိုးစိတ်သတ်မှတ်ထားသောစာရွက်စာတမ်းများလွှဲပြောင်းရန်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ပေါ်တွင်သက်ဆိုင်ရာဆောင်းပါးများနှင့်အတူစစ်ဆေးရန်သေချာစေပါ။
ပြီးတာနဲ့ Yandex အားဖြင့်သုံးစွဲသူများကိုသူတို့ရဲ့မေးလ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း၌သင်တို့ကိုသုံးကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများအားဖြင့်အခြားသူများအားဖိုင်များကိုပေးပို့ဖို့ခွင့်ပြုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ သို့သျောလညျးသငျသညျကိုကြိုတင် Yandex Disk ကိုရရန်ရှိသည်နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာဝင်ရောက်ဖို့။
အကြောင်းအရာကိစ္စတိုက်ရိုက်ဖွင့်ပါက mail ဖြင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုသာသတင်းစကားတစ်ခုပူးတွဲမှုအဖြစ်ပေးပို့အကြောင်းကြားနိုင်ပါကြောင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုအပေါ်ကြိုတင်စာရင်းလုပ်ရန်လိုအပ်ပေသည်။
အဆိုပါလုပ်ကွက်ကိုအသုံးပြုပြီးသစ်တစ်ခုမက်ဆေ့ခ်ျကိုဖန်တီးရန်ပုံစံကိုသွားပါ "ရေးပါ" နှင့်စာတိုက်ပုံးအဓိကစာမျက်နှာ။
ကိုစလှေတျခံရဖို့မှာစာ၏ပြင်ဆင်မှုပြီးစီးပြီးနောက်, window ၏အောက်ခြေတွင်, တံဆိပ် web browser ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "သင်၏ကွန်ပျူတာကနေဖိုင်တွေပူးတွဲ".
စနစ်အတွက်ပွင့်လင်းပြတင်းပေါက်မှတစ်ဆင့်သင်သည် upload တင်ချင်သောဒေတာများကိုရှာပါ။
ဒေါင်းလုဒ်ပြည့်စုံပင်ဖြစ်သည်ပြီးနောက်သင်စာရွက်စာတမ်းများကို download လုပ်ပါသို့မဟုတ် attachment များကိုမဆိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။ သငျသညျခွငျးအားဖွငျ့စာသားလက်ခံသူထံသို့စလှေတျပါလိမ့်မည်တစ်ခုချင်းစီထားတဲ့မဆိုဖိုင်များ, ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်ခြယ်။
Yandex မေးလ်ဝန်ဆောင်မှုနေဆဲဒေတာနဲ့ upload speed ကိုအများဆုံးပမာဏကိုနှင့် ပတ်သက်. ယင်း၏အသုံးပြုသူများသည်ကန့်သတ်။
ဒေတာလွှဲပြောင်းရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းယခင်က Yandex Disk ကိုမှအပ်လုဒ်တင်ပြီးစာရွက်စာတမ်းများသုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ထိုစာကိုလည်းဖိုင်တွဲများ၏မြေတပြင်လုံး directory များအမျိုးမျိုးနှင့်အတူပူးတွဲပါနိုင်ပါတယ်။
Yandex Disk ကိုသက်ဝင်စေနှင့်ကိုစလှေတျဒေတာကိုနေရာချဖို့မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်။
တစ်ဦးပြင်ဆင်ထားကြေညာချက်ထဲမှာဖြစ်ခြင်း, ယခင်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့အိုင်ကွန်ဘေးမှာ, နေရာချထားခြင်းနှင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "တစ်ဦး disc ကိုမှဖိုင်များကိုပူးတွဲ".
စာရွက်စာတမ်းသို့မဟုတ် directory များအတွက်စောင့်ဆိုင်းယာယီစတိုးဆိုင်ကဆက်ပြောသည်လိမ့်မည်။
သငျသညျထိုစာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ် data တွေကို download လုပ်ပါသို့မဟုတ်ပယ်ဖျက်ဖို့ရဖြည့်စွက်ပြီးနောက်။
တတိယနှင့်နောက်ဆုံးနည်းလမ်းကပို optional ကိုနှင့် disk ကိုလှုပ်ရှားမှုအပေါ်မူတည်ပါသည်။ ဤနည်းလမ်းကိုသည်အခြားမက်ဆေ့ခ်ျအနေဖြင့်ပေးပို့သည့်ဒေတာတခါသုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ကြိမ်ကဆိုပါတယ် panel ကိုမှာလက်မှတ်နှင့်အတူ pop-up ဒြပ်စင်ကိုသုံးပါ "မေးလ်ကနေဖိုင်တွေပူးတွဲ".
ရလဒ်ပေးတဲ့ dialog box ကိုခုနှစ်တွင်ပူးတွဲမှုရှိသည်သောအက္ခရာများ၏ဖိုလ်ဒါ navigate ။
အလိုအလျှောက် Latin သို့ဘာသာပြန်ထားသောအပိုင်းများအမည်။
သူသည်စာရွက်စာတမ်းကိုစလှေတျခံရဖို့ကိုတွေ့ရွေးဖို့ကအဲဒီအပေါ်မှာ click စာနယ်ဇင်း "ပူးတွဲ".
အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, သင်တစ်ဦးတည်းသာ file ကို add နိုင်ပါတယ်။
အချက်အလက်များ၏ထို့အပြင်နှင့်ပူးတွဲအတူယေဘုယျအားဖြင့်အလုပ်ပြီးတာနဲ့တံခါးသော့ကိုသုံးပါ "Send" တင်ပို့ရေးသားခြင်း။
ဒါဟာဒီလက်ခံမှာ data တွေကို display ကိုဆက်ကြောင်းဖြစ်ပေါ်စေသကဲ့သို့, စာရွက်စာတမ်းများနှင့်ဖိုင်တွဲများပူးတွဲတစ်ချိန်တည်းမှာအကြံပြုသည်မဟုတ်။
အသုံးပြုသူသင့်ရဲ့စာကိုလက်ခံရရှိမည်, download, သင့်ရဲ့ disk ကိုမှဖိုင်များကို add သို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းများကိုဖတ်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မည်။
သင့်အနေဖြင့်အခြားဖိုင်များနှင့်အတူ folder ကိုသာ contents တွေကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။
ယင်း၏ functional ဖြစ်စေဖွဲ့စည်းပုံအတွက် Mail ကို Mail.ru ယခင်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့ဝန်ဆောင်မှုကနေအများကြီးကွဲပြားခြားနားသောမဟုတ်ဘူး။ စာရွက်စာတမ်းများပေးပို့ခြင်းအတွက်ဒီ e-mail, box ကိုသုံးတဲ့အခါအကျိုးဆက်, သင်တို့ကိုနောက်ထပ်ပြဿနာများရှိသည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ဒီ site ၏အုပ်ချုပ်မှုအသုံးပြုသူများ file ကို directory ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းပေးသနားတော်မူခြင်းမဟုတ်ပါ။
စုစုပေါင်း Mail.ru နှစ်ခု Full-ဥတုနည်းလမ်းနဲ့တစျခုအပိုဆောင်းရှိပါတယ်။
အဆိုပါကလစ်၏အထက်ဘက်မှာရှိတဲ့ Mail.ru ၏ပထမစာမျက်နှာပေါ်တွင်တံဆိပ်ပေါ် "စာတစ်စောင်ရေးထား".
ကိုစလှေတျခံရဖို့စာကိုဖြည့်စွက်ရန်အဖြစ်လိုအပ်သော, အယူနစ်အောက်ကဒေတာဝန် bar ကိုနေရာချထား "အကြောင်းအရာ".
ထောက်ပံ့ပထမဆုံး link ကိုသုံးပါ "ဖိုင်တစ်ခု Attach".
Windows Explorer ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဆက်ပြောသည်ခံရဖို့စာရွက်စာတမ်းနှင့်ကလစ်နှိပ် select လုပ်ပါ "တက်တူး".
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ထောက်ခံဒေတာ Multibooting ။
Mail.ru တစ်ဦးအလွတ်စာရွက်စာတမ်းများ၏ပူးတွဲဖိုင်ကို support မ။
အဆိုပါစာတိုက်ဝန်ဆောင်မှုသတ်များ၏အခြေခံထားရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ speed data ကိုအပ်လုဒ်ကို, သင်ချက်ချင်းဖိုင်တွေကိုထည့်သွင်းဖို့ခွင့်ပြုမထားပေ။
ဒုတိယနည်းလမ်း၏အမှု၌, သင်က pre-Mail.ru တိမ်တိုက်ရှိသည်နှင့်ပူးတွဲလိုအပ်ဖိုင်တွေကို add ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကိုဖတ်နေဘို့သင့်ကိုသက်ဆိုင်ရာဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ချုပ်ချည်အားဖြင့်သာငါကိုတံဆိပ်ပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ "ဟုအဆိုပါတိမ် မှစ. ".
သွားလာမှု menu ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်စာရွက်စာတမ်းဝင်းဒိုးကိုကြည့်ရှုခြင်း, တပ်မက်လိုချင်သောသတင်းအချက်အလက်နေရာချထား။
ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ပူးတွဲ"စာမှမိုဃ်းတိမ်ကနေဒေတာတွေကို embed လုပ်ဖို့။
နောက်ဆုံးပေမယ့်လူအတော်များများနည်းလမ်းယခင်ကပါဝင်သောဒေတာနှင့်အတူမေးလ်ကိုစလှေတျပါပွီရန်သင့်အားတောင်းမည်အတော်လေးအသုံးဝင်ပါသည်။ ထို့အပြင်စာရွက်စာတမ်းများဒဏ်ငွေကိုလက်ခံရရှိထားရမည်ပူးတွဲနိုင်ရန်အတွက်, မက်ဆေ့ခ်ျမပို့ခဲ့ပါ။
အီးမေးလ်ထဲတွင် data ကိုအပ်လုဒ်ကို toolbar ကိုအသုံးပြုခြင်း, link ကို click နှိပ်ပြီး "ဟုအဆိုပါနီးပါး၏".
Built-in box ထဲမှာထုတ်လုပ်ပြီးသတင်းစကားများ၏ထို့အပြင်လိုအပ်တစ်ခုချင်းစီကိုစာရွက်စာတမ်းများအတွက်ရွေးချယ်ရေးအကွက်ကိုရွေးချယ်ပါ။
စာနယ်ဇင်းများ "ပူးတွဲ" ဒေတာအပ်လုဒ်ကို process ကိုစတင်ပါရန်။
အကြံပြုချက်များများ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုပြီးနောက်ခလုတ်ကိုသုံးပါ "Send" တင်ပို့ရေးသားခြင်း။
မက်ဆေ့ခ်ျအတွက်လက်ခံရရှိသူက၎င်း၏အရွယ်အစားနှင့်အမျိုးမျိုးပေါ် မူတည်. ဖိုင်တွေအပေါ်အချို့သောလုပ်ရပ်များလုပ်ဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မည်:
အသုံးပြုသူလည်းမော်ကွန်းတင်နှင့် download လုပ်ရန်, ဥပမာ, ဒေတာအချို့ကိုဘုံကိုင်တွယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ငါတို့သည်သင်တို့ Mail.ru. ကနေမေးလ်သုံးပြီး file ကိုပို့ခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှရတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်
မေးလ်သော်လည်း Google ထံမှဝန်ဆောင်မှုနှင့်အခြားလူသိအရင်းအမြစ်များကိုကိုနှင့်သဟဇာတဖြစ်ပေမယ့်နေဆဲကွဲပြားခြားနားမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဤဒေါင်းလုတ်လုပ် add ကို၎င်း, မက်ဆေ့ခ်ျကိုအတွင်းဖိုင်ကိုသုံးစွဲဖို့အထူးသဖြင့်သက်ဆိုင်သည်။
Google ထံမှအားလုံးန်ဆောင်မှုများနှင့်ဆက်စပ်သောကြောင့် Gmail ကိုပိုမိုတစ်လောကလုံးဖြစ်ပါတယ်။
PC ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများအတွက်အရှိဆုံးအဆင်ပြေသင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုမှဒေါင်းလုပ်စာရွက်စာတမ်းများမှတဆင့် data ကိုပို့မယ့်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ဂျီမေးလ်အကောင့်ကိုဖွင့်ပြီးရေးသားရန်ပုံစံကိုချဲ့ထွင်တဲ့လက်မှတ်နှင့်အတူတစ် interface ကိုဒြပ်စင်ကို အသုံးပြု. "ရေးပါ".
စစ်ဆင်ရေး၏တစ်ဦးထက်ပိုအဆင်ပြေ mode မှာအယ်ဒီတာသို့ပြောင်းပါ။
စာအရေးအသားအပေါငျးတို့သညျအခွခေံနယ်ပယ်များတွင်ဖြည့်ပြီးနောက်အောက်ခြေပေါ်တွင်လက်မှတ် panel ကိုအပေါ်ကိုအသာပုတ် "files တွေကိုပူးတွဲ".
Windows Explorer ကိုမှာ windose tacked အချက်အလက်များ navigate နှင့် button ကို click "ပွင့်လင်း".
နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုငါတို့သည် built-in အကူအညီနဲ့သုံးပြီးအကြံပြုပါသည်။
ကြီးမားတဲ့ data တွေကိုအသံအတိုးအကျယ်မပို့ဖျော်ဖြေတဲ့အခါမှာသတိထားပါ။ Service ကို attachment များကိုအများဆုံးအရွယ်အစားအပေါ်အချို့သောကန့်သတ်ထားပါတယ်။
ဒုတိယနည်းလမ်းက Google Drive ကို cloud storage အပါအဝင် Google ထံမှဝန်ဆောင်မှုများ, သုံးစွဲဖို့နေသားတကျဖြစ်လာကြသူလူတို့အဘို့ကပိုသင့်လျော်သည်။
စာသားမတံဆိပ်များနှင့်အတူခလုတ်ကိုသုံးပါ "ထဲမှာ Google Drive ကိုဖိုင်များ Insert လင့်များ".
သွားလာမှု menu ကိုတော်အားဖြင့်, tab ကိုပြောင်းရန် "Loading".
ပြတင်းပေါက်၌ပေးအပ်တင်စွမ်းရည်ကိုသုံးပြီး, Google Drive ကိုအပေါ်အချက်အလက်များ၏ထို့အပြင်လုပ်ဆောင်။
ဖိုင်တွဲတစ်ခုပေါင်းထည့်ဖို့, ဒေါင်းလုပ်ဧရိယာ၌အလိုရှိသော folder ကိုဆွဲယူပါ။
သင်တို့သည်လည်းပြီးသားရရှိနိုင်ပါက Google Drive ကိုအပေါ်ဒေတာကို အသုံးပြု. ဆီအကူအညီတောင်းနိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဖြစ်စဉ်ကို attachment သတင်းအချက်အလက်ပြီးစီးခလုတ်ကိုသုံးပါ "Send".
အသုံးပြုသူကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်ရှိသမျှ data ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုအရေအတွက်ပေးပို့နေသည်ရပါလိမ့်မယ်။
ဤနည်းလမ်းကို Google ရဲ့ e-mail, မှတစ်ဆင့်ဒေတာပေးပို့ခြင်း၏နောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်မေးလ်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူအလုပ်ပြီးစီးနိုင်ပါတယ်။
အလားတူအရင်းအမြစ်များရုရှားစျေးကွက်အပေါ် Rambler ဝန်ဆောင်မှုနည်းနည်းဝယ်လိုအားသည်နှင့်ပျမ်းမျှအသုံးပြုသူများအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုအနည်းဆုံးအရေအတွက်ကပေးပါသည်။ ၏သင်တန်း, ဒီကိုတိုက်ရိုက် E-Mail ကအားဖြင့်အမျိုးမျိုးသောစာရွက်စာတမ်းများ၏ dispatch စိုးရိမ်။
Rambler အားဖြင့်မေးလ်ဖိုလ်ဒါပေးပို့ခြင်း, ကံမကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။
သင့်ရဲ့အီးမေးလ်ထဲမှာ Log နှင့်တံဆိပ်ပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ "ရေးပါ".
မျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေတွင်, မြို့တော်လယ်ပြင်၌ဖြည့်စွက်, တည်နေရာနဲ့ link ကို click နှိပ်ပြီး "ဖိုင်တစ်ခု Attach".
Windows Explorer ကိုများတွင်တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသည့်စာရွက်စာတမ်းများ၏ရွေးချယ်ရေးလုပ်ဆောင်ပါနှင့်ခလုတ်ကိုသုံးပါ "ပွင့်လင်း".
လက်ခံသူ၏အဖွင့်အသီးအသီးဖိုင်ကိုစလှေတျမက်ဆေ့ခ်ျကို download လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်ပြီးနောက်။
ဆောင်းပါးထဲမှာအချက်အလက်တွေအားလုံးကိုအပြင်ကလိုအပ်ခဲ့လျှင်, သင်မသက်ဆိုင်နောက်ခံ site ၏ဒေတာနဲ့ဖိုင်တွဲတွဲနိုင်, သတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ သငျသညျဖြစ်စေလွယ်ကူသောဥပမာ, WinRAR Archiver ကိုအသုံးပြုရန်နိုင်ပါတယ်ဒီကိုကူညီပါ။
စာလက်ခံသူက archive ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးအထုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်, တစ်ခုတည်းဖိုင်အဖြစ်စာရွက်စာတမ်းများ Pack ကိုများနှင့်တင်ပို့။ ဒါကမူလ directory ကိုဖွဲ့စည်းပုံကယ်တင်နှင့်စုစုပေါင်း data တွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးမှုအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်လိမ့်မည်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: အခမဲ့ယှဉ်ပြိုင် WinRAR Archiver
ဗီဒီယို Watch: how to view apk file icon on pc - how to view apk thumbnail icon on pc - how to show apk icon on pc (အောက်တိုဘာလ 2019).